Taliyaha ciidanka Lugta ee Sweden oo Xamar ku booqday ciidan Sweden ka jooga Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taliyaha ciidanka lugta ee Sweden Brigad General Stefan Andersson. Foto: Warsame Elmi/SR
Taliyaha ciidanka Lugta ee Sweden oo Xamar ku booqday ciidan Sweden ka jooga Soomaaliya
La daabacay måndag 1 februari 2016 kl 12.40
Taliyaha ciidanka lugta ee Sweden ayaa todobaadkii hore booqasho ku tagay magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Mogadishu.
Booqashada brigad General Stefan Andersson waxay la xiriirtay sidii uu u soo indho indheyn lahaa xaaladooda nolaleed saraakiil Iswiidhish ah oo sagaal gaaraya kuwas oo tabaro siiya saraakiil hoose oo ka tirsan ciidamada difaaca dalka soomaaliya.
Tabarayaasha Iswiidhen ayaa hoostaga mashruuc tababar oo EU horumood ka tahay loona yaqaano EU treaning mission.
- Tabbarkan EUTM waxuu la mid yahay tabobarada ciidan ee EU siiso ciidamada waddanka Mali. 150 iskugu jira saraakiil sare iyo tabarayaal oo ka soo kalo jeeda dhowr waddan oo EU ah ayaa tabobarkan baxiya. Waxay ciidamada Soomaaliya ka caawiyaan tabobarada, gaar ahaan in ay tabobaraan taliyaasha gaasaska iyo guutooyinka. Waxay sidoo ku caawiyaan talooyin dhanka siyaasadda ah iyo weliba dhanka ciidamada, ayuu yeri.
Boqashada uu Brigad General Stefan Andersson ku tagay Mugadishu waxay la xiriirtay booqashooyin rotiin ah oo uu ku booqdo ciidamada Sweden ee caalamka daafahiisa ka howl-gala. Mugadishana Sweden waxaan ka jooga ciidamo gaaraya sagaal oo ka kooban shan saraakiil ah iyo afar tabobarayaal ah. Sarkaalka labaad ee ugu sareeya tabarayaasha EU ka socda waa gaashaanle sare oo ka socda Sweden ayuu yeri Stefan Andersson.
Tabarayashaa ka socda EU iyo Sweden waxay soomaaliya tageen sannadkii 2014kii kaddib markii ay ka soo guureen xero tabobar oo ku taalay dalka Uganda. Xero tababar oo laga hirgeliyey koonfurta magaalada Xamar oo la yiraahdo Jaziira Teaning kamp ayey ku tabobaraan ciidamada Soomaaliya.
Inkastoo Magaalada Xamar ay ku soo noq noqdaan falalka argagaxiso iyo nabad-geliyo daro hadana Stefan Andersson ma aaminsana in ciidamada Sweden ee Xamar ku sugan xaaladooda amni qatar ku jirto.
- Waxaa oran karaa amnigooda waa wanaagsan yahay, inkastoo qatartu iska jirto. Aan sidaas u cago-dhigayba waxaan maqlay rasaas, markii warbaxinta lay keeneyna waxaa lagu yeri sida tan waa nolal maalmeedka. Waxaan dhaci karta in ay rasaasta u ridaan dabaal deg ama ay ridan qolyo doonaya in ay wax qasaan, marka xaaladda halkas ka jirtaa waa mid isku yaacsan, ayuu yeri.
Mashruuca tabarka EUTM ee lagu tabobarayo ciidamada Soomaaliaya waxuu soo billowdey sannadkii 2010kii. Intii tabobarkan ka socday Uganda waxaa lagu guuleystay in la tabobaro saddex kun oo ciidan Soomaaliyeed ah, sida uu sheegay General Stefan Andersson. Markii mashruucan loo soo raray Soomaaliya gudaheeda qorshaha waxuu ahaa in muddo lix todobaadk lagu tabobaro 600 oo ciidamo ah balse waa lagu guuldareystay oo waxaa la tabobaray keliya 300 ciidan ah. Imminkana waxaa Bryssel ka socda wadohadal la xiriira mashruuca EUTM Somalia in loo kordhiyo waqtiga, sida uu yeri Stefan Andersson.
- Howl-shan waa shaqo hadef dheer. Hadda mashruucan muddadiisa waxay ku egtahay December 2016ka. Haddana waxaa ka socda Bryssel wadohadalo u dhaxeeya beelaha EU oo ah in waqtiga loo kordhiyo mashruucan oo laga dhigo illaa iyo 2017ka.